၂၀၁၈ သည် LOGAN PAUL ကဲ့သို့သူတို့၏အရည်အချင်းမရှိသော YOUTUBERS တစ်နှစ်ဖြစ်ရန်လိုသည် - သတင်း
၂၀၁၈ သည် Logan Paul ကဲ့သို့သူတို့၏အရည်အချင်းမရှိသော YouTubers တစ်နှစ်ဖြစ်ရန်လိုသည်
YouTuber သည်လူသေအလောင်းကိုကလစ် နှိပ်၍ ပြက်ရယ်ပြုခြင်းအတွက်ရိုက်ကူးခြင်း၊ ၎င်းသည် Black Mirror ၏ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီတော့ Logan Paul နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
သူသည် ၂၂ နှစ်အရွယ် YouTuber ဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်လိုင်းများကိုသူ့ချန်နယ်တွင် တင်၍ စာရင်းသွင်းသူ ၁၅ သန်းရှိသည်။ ပြီးခဲ့သည့်ညကသူသည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေသူ၏အလောင်းကိုပြသောဗီဒီယိုတစ်ခုကိုတင်ခဲ့သည်။
ဤအရာကိုရှုထောင့်တွင်ထားရန်: Logan Paul ၏ပျမ်းမျှကြည့်ရှုသူသည်စိတ်စွဲမှတ်စရာကောင်းသော၊ သူကမဆိုင်းမတွဘဲသူက 'ငါတို့ဟာအလောင်းကိုဂျပန်သတ်သေတဲ့သစ်တောမှာတွေ့ခဲ့တယ်' ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုတင်ခဲ့သည်။
Logan paul နှင့်သူ၏သူငယ်ချင်းများသည်ရယ်။ ပြုံးပြီးနောက်တွင်အသေကောင်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် #LoganPaulisover #loganpaul pic.twitter.com/bkoQEiyofx
- ဖော်ထုတ်ခြင်း•ကျော်ကြားသူများ (@exposingfavcb) ဇန်နဝါရီလ 2, 2018
(ယခုဖျက်သိမ်းလိုက်သော) ဗီဒီယိုအပြည့်တွင်သူသည်လူသေနှင့်အနီးကပ်သွားပြီး 'မင်းအသက်ရှင်နေလား။ ငါတို့နဲ့အတူနေနေတာလား သူကမျက်နှာကိုမှုန်ဝါးစေ, ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ချုံ့။ Logan နဲ့သူ့သူငယ်ချင်းတွေကသူပြောတဲ့အတိုင်းရယ်မောကြတယ်။ 'သေတဲ့ကောင်ဘေးမှာမင်းဘယ်တော့မှမရပ်ဘူး' မကြာခင်မှာပဲသူဟာအကူအညီတောင်းခံမယ့်အစားသူကသာမန်လူသားတွေလုပ်သမျှကိုလုပ်တယ်၊ သူကတစ်ခုလုံးကိုရိုက်ကူးပါတယ်။
သို့သော်ဤအပြုအမူသည်အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ ပေါလ်သည်သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုတစ်ခုလုံးကိုကလစ်နှိပ်ခြင်းအတွက် 'ရူးသွပ်ခြင်း' လုပ်ခြင်းအပေါ်တည်ဆောက်ခဲ့သည် သူကပရိသတ်ငယ်ရွယ်သောပရိသတ်များအားစဉ်းစားရန်လှည့်စားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သူသည်ဟိုတယ်တစ်ခုတွင်တွေ့ဆုံခြင်းမတိုင်မီသေနတ်ဖြင့်ပစ်သတ်ခံခဲ့ရသည် ပြီးတော့သူတို့ကြည့်နေတုန်းသူတို့ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်နေတာကိုသူတို့တွေ့နိုင်တယ်။
မင်းတို့ YouTubers ကိုသူတို့အင်ပါယာတွေတည်ဆောက်ဖို့သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အမှန်တကယ်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးပျောက်ကွယ်သွားတာကိုငါတို့ရပ်တန့်လိုက်တာမဟုတ်လား။
Logan ရှင်ပေါလုသော်လည်း ဤသို့လုပ်ခြင်းအတွက် YouTuber တစ်ခုတည်းသာမဟုတ်ပါ သူသည်သူ၏ 'Maverick' ကုန်စည်များကိုဗီဒီယိုများတွင်ပုံမှန်ချိတ်ထားသည်။ ခရစ်စမတ်ကျော်မှာသူဟာအသံမမြည်တဲ့သီချင်းအမျိုးမျိုးကိုတောင်ဖန်တီးခဲ့တယ်၊ သူကတစ်ချိန်တည်းတွင်သူက“ မစ္စစ်ကလော့စ်နှင့်တွေ့ဆုံပြီးနှစ်ကြိမ်ထိခဲ့သည်” ဟုသူတို့ကိုအသိပေးနေစဉ် သူကဲ့သို့သောသင်ကဲ့သို့သောဥယျာဉ်များသည်ကလေးများကိုအမြတ်ထုတ်ကာစျေးကြီးသောကုန်ပစ္စည်းများအားဖြင့်၎င်းတို့ကို“ ပါ ၀ င်ခြင်း” နှင့်“ ခင်မင်ရင်းနှီးခြင်း” ကိုရောင်းသည်။
အဆိုပါ prankster mega-YouTubers မိမိကိုယ်ကိုစွဲလမ်းတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုမွေးမြူပါပြီ။ အသေကောင်ကို Logan မြင်သောအခါသူ၏ပထမဆုံးစကားများမှာ 'ရဲကိုခေါ်ကြရအောင်။ အဲဒီအစားသူတို့က 'ဒါကငါ့အတွက်ပထမဆုံးပဲ' အခြားဗွီဒီယိုတိုင်းသည်လည်းအလားတူပုံစံမျိုးဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကား YouTubers သူတို့ကိုယ်သူတို့ဂရုစိုက်မှလွဲ။ ဘာမျှမ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ပရိသတ်တွေကသူတို့ကိုသေတဲ့အထိကာကွယ်ပေးလိမ့်မယ်။ ယနေ့သူ၏အုံကြွသောပရိသတ်များပြုလုပ်သောဤတုံ့ပြန်မှုဗီဒီယိုအချို့ကိုကြည့်။ လူသား၏အနာဂတ်အတွက်ငိုကြွေးရန်မကြိုးစားပါနှင့်။
အတိုချုပ်ပြောရရင် Logan Paul ရဲ့ပရိသတ်တွေ #loganpaul #logang #Maverick LMFAO! pic.twitter.com/n7SWXrc2B1
- KEEM? (@KEEMSTAR) ဇန်နဝါရီလ 2, 2018
Logan Paul ၏ရှေ့နေသည်ကြေငြာချက်တစောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည် pic.twitter.com/srK8spfbYB
အကြောင်းအရာများကိုအချိန်ပိုဖန်တီးခြင်းသည်ဆိုလိုသည်မှာသင်အရင်လုပ်ခဲ့သမျှကိုဆက်လက်ထားရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော် Youtuber ၏သဘောသဘာဝကိုရှာဖွေခြင်းသည်မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်တွင်သူ၏ ဦး ခေါင်းကိုအားဖြည့်ထားသောယောက်ျားကဲ့သို့ပင်သူတို့သည်အမြင်များကိုမည်မျှအထိဖြတ်ကျော်သွားသည်ကိုမသိမှီအထိသူတို့မရပ်နိုင်ပါ။
ဒီဗီဒီယိုတွေကလူတွေကိုဘာမှမသင်ပေးဘူး၊ သူတို့ဟာအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး၊ သူတို့ပြသတဲ့အရာကတော့အမှန်တကယ်ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်လုံးဝမရှိခြင်းပဲ၊ ရွံစရာကောင်းတဲ့အသံ၊
အဆိုးဆုံးအပိုင်းလား။ Logan Paul ကဲ့သို့လူများက၎င်းကိုအောင်မြင်မှုတစ်ခုအဖြစ်တင်ပြခဲ့ပြီးသူ၏တစ်ချိန်တည်းတွင်မျက်မမြင်များကိုလုယက်နေစဉ်သူ၏ပရိသတ်များအားဘဝအကြံဥာဏ်များပေးခဲ့သည်။
ဒီဟာအသစ်မဟုတ်ပါဘူး။ မင်းတိုတိုတာတာမကောင်းဘူးဆိုတာငါတို့သိပြီ ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးတော့လူတွေဟာဒီအရည်အချင်းမရှိတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာမရှိရင်ငါတို့ပိုကောင်းမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနိုးနေကြတယ်။ ကျေးဇူးပြု၍ 2018 ကိုသူတို့ဂူထဲသို့ပြန်ဝင်ကြပြီးဘယ်တော့မှပြန်လည်ထွက်ခွာမယ့်နှစ်ဖြစ်ပါစေ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေခြင်းသို့မဟုတ်ဤဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသောအခြားအရာများကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုခံစားနေရပါကရှမာရိလူမျိုးများသည်တစ်နေ့လျှင် ၂၄ နာရီလုံးလုံးရုန်းကန်နေရသောမည်သူမဆိုအတွက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများလုံးဝလျှို့ဝှက်ထားသည့်နေရာတွင်စကားပြောရန်လုံခြုံသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယူကေဖုန်းနံပါတ်သည် ၁၁၆ ၁၂၃ ဖြစ်သည်။